ရွှေဒင်္ဂါးဖြင့် ချက်သော ကြက်သားကာလသားဟင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » ရွှေဒင်္ဂါးဖြင့် ချက်သော ကြက်သားကာလသားဟင်း
ရွှေဒင်္ဂါးဖြင့် ချက်သော ကြက်သားကာလသားဟင်း
Posted by စဆရ ကြီး on Jan 10, 2012 in My Dear Diary | 19 comments
တိတ်ဆိတ်နေသော လမ်းပေါ်တွင် စက်ဘီးရွှံကာနှင့် ခြေနင်းမှ တကျွိကျွိမြည်နေသံမှတစ်ပါး အရာရာသည်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်သား။ ငြိမ်သက်ဆို ည ၁၁း၀၀ ကျော်လဲရှိနေပြီဖြစ်သည့်အတွက်ဥာဏ်ကွဲရပ်ကွက်ကြီးသည်ကား မေမြို့၏ အအေးဒဏ်ကြောင့်ထင်၊ အိပ်မောကျနေသယောင်ပင်။ ကိုရင်ရှူံးသည် မျက်မှန်ကို အသာအယာပွတ်လိုက်သည်။ ရေငွေ့များက မှန်ပေါ်တွင် လာရောက်တွဲခိုနေသည့်အတွက် ရှေ့ကိုသဲသဲကွဲကွဲ မမြင်ရပေ။ အိမ်များမှ ဖြာကျလာသည့် အလင်းရောင်များဖြင့် သွားနေကျလမ်းကို ဖြေးဖြေးချင်းဆက်နင်းလာခဲ့သည်။ မန္တလေး-လားရှိူးလမ်းမကြီးပေါ်အရောက်တွင်မတော့ အနည်းငယ် ဆူဆူညံညံရှိလာပြီဖြစ်သည်။ ထိုတော့မှ ကိုရင်ရှူံးလည်း စက်ဘီးကို အသံပေါင်းစုံထွက်အောင် အမြန်နင်းရင်း ဥာဏ်တော ၁၈ လမ်းသို့ ခပ်သုတ်သုတ်လေးနင်းလာခဲ့သည်။ အိမ်မှထွက်လာသည်မှာ အတော်ပင်နောက်ကျနေပြီဖြစ်သည်။ သူတို့တွေ စောင့်နေကြတော့မည်။ သူတို့တွေဆိုသည်မှာ…
လွန်စွာလိုက်ဖက်သော နာမည်ပင်ဖြစ်သည်။ အသက်မှာ ၁၆ နှစ်သားသာရှိသေးသော်လည်း လူကောင်မှာ အတော်လေးထွားကျိုင်းလှသည်။ ကြွက်သားများ အပြိုင်းပြိုင်းထနေသောကြောင့် မူရင်းနာမည်ပျောက်ပြီး ချစ်စနိုးဖြင့် ခေါ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
နာမည်ရင်းမှာကား ခိုင်မြင့်ခိုင်ဆိုသည့် လှပသော နာမည်လေးဖြစ်သည်။ သို့သော် သူမသည်ကားအတော်လေးပင် ၀ပါသည်။ ပါးစုံ့ကြီးများမှာ မျက်နှာတွင် တစ်ဖက်တစ်ချက် တွဲကျလျက်သား။ ထို့ကြောင့်ပင် အလွယ်တကူ ဖားမြင့်ခိုင်ဟုခေါ်ကြသည်။
မွန်လူမျိုး၊ နာမည်ရင်း သူရစိုးဖြစ်သည်။ သူသည်ကား ဆံပင်ထောင်ထောင်နှင့် မျက်ခုံးမွှေးထူထူဖြစ်သည်။ မေမြို့ကန်တော်ကြီးသို့ ငှက်ပြခန်းစတင်ဖွင့်လှစ်သောအခါက ၄င်းမှ ဒီးဒုတ်ငှက်အား သူနှင့် အတော်လေးတူကြောင်း ပြောရာမှတစ်ဆင့် နာမည်ရင်းပျောက်ပြီး ဒီးဒုတ်ဟုသာ အမည်တွင်တော့သည်။
သူသည်ကား ရန်ကုန်သား။ တစ်ကိုယ်လုံးတွင် ရှာကြည့်သော်မှ မည်သည့်အသားမှ မတွေ့ရအောင်ပင် ကိုယ်ရေစစ်လွန်းလှသည်မှာ ဘဲတစ်ကောင်ကို ကင်ထားသည့်အလား။ ထို့ကြောင့်ပင် သူသည်ကား ဘဲကင်ဟု အမည်တွင်စေသား။
သူမသည်ကား အတော်လေးပင် အရပ်ရှည်ပါ၏။ မျက်နှာလေးသည်ကား အတော်လေး ဆွဲဆောင်နိုင်ပါပေ၏။ နာမည်လေးသည်ကား အတော်လေးပင် ကဗျာဆန်လှပေသည်။ တစ်ခုပဲပြောစရာရှိသည်။ အပြားလိုက်ကြီးဖြစ်နေသည်။ ရှိစုမဲ့စုလေးများ ကောက်ညှင်းထုပ်စီးပြီး ၀တ်ပါသော်ငြား ဘယ်လို့ ဘယ်လိုမှပင် မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း ပြောစရာအမှတ်အသားမရှိ၊ ရယ်သောအခါတွင်လည်း လွန်စွာမှပင်ထူးဆန်းလှသော ရည်နည်းတစ်မျိုးဖြင့် ရယ်ခြင်း၊ သူမ၏ချစ်သူမှာ ကျွဲဟုခေါ်သော သူငယ်ချင်းဖြစ်သည်ကတစ်ကြောင်းကြောင့် ကြက်ဟုသာ အမည်တွင်တော့သည်။ ကြံကြံဖန်ဖန်တော့ စဉ်းစားမိပါသေးသည်။ ကြက်နှင့်ကျွဲ ညားများ ညားခဲ့ရင် ကျွဲခေါင်းနဲ့ ကြက်ကိုယ်ဖြစ်မလား၊ ကြက်ခေါင်းနဲ့ ကျွဲကိုယ်ဖြစ်မလား၊ အတော်လေးတော့ ရယ်စရာကောင်းသားဟု။
ဆရာမများမှ အတော်လေး ချီးကျူးခံရသော ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ကျူရှင်သည်ကား နှစ်ကျကျောင်းသားများသာ များသည့်အတွက် ဆရာစာသင်ချိန်များတွင် ဘယ်သူမှ သေချာ လိုက်နားထောင်ခြင်းမရှိပေ။ သူတစ်ယောက်သာ ဆရာပြောသမျှ၊ ရှင်းပြသမျှကို မလှုပ်မရှက်နားထောင်လေသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ချီးကျူးခံရလေသည်။ အကြောင်းရင်းမှာတော့မူကား သူသည်ကား ဆေးကြောင် ကြောင်နေခြင်းသာဖြစ်သည်။ မျက်လုံးများမှာ ဘာမှမမြင်၊ ဆေးအရှိန်ကြောင့် မျက်လုံးထဲတွင် နတ်သမီးလေးများကိုသာ မြင်နေခြင်းကြောင့် မလှုပ်မရှက်ကြည့်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိသွားသည့်အချိန်မှစပြီး ချီးကျူးခဲ့သော ဆရာများမှာ အတော်လေးပင် အရှက်ရသွားလေတော့သည်။
ဆက်ပါမည်။ ယနေ့သည်ကား သူခိုးကြီးများည ဖြစ်သည်။ ကျူရှင်တွင် ကြက်သား ကာလသားဟင်း ချက်စားကြပေမည်။ ကိုရင်ရှူံးသည်ကား ထိုကျူရှင်သို့ နောက်ဆုံးမှ မယောင်မလည်ဖြင့်ရောက်လာသောသူဖြစ်သည်။ ကျူရှင်ရှိ ကျောင်းသား/သူ အများစုမှာကား နှစ်ကျကျောင်းသားများသာဖြစ်သည့်အတွက် သင်ကြားသည့်ဆရာများမှာလည်း လာချင်သည့်အခါလာ၊ မလာသည်ကများသည်။ ထိုအချိန်က ကိုရင်ရှူံးပုံကိုသရုပ်ဖော်ရမည်ဆိုလျင် ခေါင်းတွင် အုန်းဆီများ မျက်နှာပေါ်တွင် စီးကျနေသည်အထိ လိမ်းပြီး ရှေ့တစ်လက်မ၊ နောက်ပြောင်ဆံပင်ကို ဘေးခွဲ ကျကျနန ဖီးလျက်သား၊ မျက်နှာပေါ်တွင်လည်း မျက်မှန်တစ်လက်က ပုံမကျ၊ ပန်းမကျပုံဖြင့် တပ်ဆင်လျက်သား။ လည်ပင်းကျယ်သီးအစေ့တပ်လျက်သား၊ ဖုဖုဖောင်းဖောင်း ဘေးလွယ်အိတ်ကြီးကို လွယ်ပြီး ပုဆိုးရင်ခေါင်းတက်ဝတ်ကာ ဘဲလ်တစ်ခုမှလွဲပြီး ကျန်တာအကုန်အသံမြည်နေသည့် စီးတော်ယာဉ်ကြီးအားစီးလျက် ကျောင်းတက်နေရသူဖြစ်သည့်အတွက် ၄င်းတို့မှာ သူတို့နည်း သူတို့ဟန်ဖြင့် ဆိုးကြသော်လည်း ကိုရင်ရှူံးကိုမူကား အတော်လေး စောင့်ရှောက်ကြလေသည်။ စာဂေါက်လေး တစ်ယောက်အနေဖြင့် ဖြစ်သည်။
ယနေ့တွင်လည်း သူတို့ကြက်သားဟင်းချက်စားကြမည်ဆိုသည်မှာ ဆီ၊ ဆား၊ အချိုမှုန့်သာ စုပေါင်း အကုန်အကျခံပြီး ကျန်တာများကို ရပ်ကွက်အိမ်များမှ ကိုယ့်ဖာသာ သွားယူကြမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ကိုရင်ရှူံးအား မခေါ်ပဲ သူတို့ဖာသာ စီစဉ်ကြလေသည်။ ကြက်ရှာသည့်သူကရှာ၊ ဘူးစင်ရှိသည့်အိမ်အား ရှာသည့်သူကရှာဖြင့် ညနေကတည်းကပင် အစီအစဉ်တွေ ဆွဲကြပြီးသားဖြစ်သည်။ ကိုရင်ရှူံး ကျူရှင်သို့ရောက်သောအခါ ကျူရှင်အတွင်းဝယ် အတော်လေးပင် ကယောက်ကယက် ခတ်နေပြီဖြစ်သည်။
ဖားမြင့်ခိုင်မှာ ကျူရှင်ခန်းအတွင်း ပတ်ပြေးလျက်၊ အနောက်တွင်ကား ကြက်သည် တရွတ်တိုက်ကြီးဆွဲပါလျက်သားဖြင့် ဖားပြုပ်ကို ငါဖမ်းမိထားပြီဟေ့ဟု တွင်တွင်ကြီးအော်လျက်၊ ဖားမြင့်ခိုင်သည်ကား ပြေးမြဲပြေးလျက်သားနှင့်ပင် ဘာဖြစ်နေသည်မသိပင်။ နန်းမွမ်းစံ ခေါ် မွမ်စိမှာကား မျက်လုံးပေါက်များပျောက်သည်အထိ ထိုင်ခုံတွင် ထိုင်ပြီး လက်ညိုးထိုးလျက်သားနှင့် ရယ်မောနေလေသည်။
ကျွဲမှာမူကား ကျူရှင်ရှေ့ရှိ ၆ လက်မခန့်ကျယ်သောရေနှုတ်မြောင်းလေးနားတွင် ဖီးဆင့် စက်ဘီးကြီးကို မလျက်သားနှင့် ရေနှုတ်မြောင်းတစ်ဖက်ရှိ ဒီးဒုတ်အား စက်ဘီးအားလှမ်းပေးနေရင်းနှင့် ပြောနေသည်မှာ.. ဒီချောင်းကြီး ဘယ်တုန်းက ငါတို့ကျူရှင်ရှေ့ရောက်လာပါလိမ့်ဟု။ ဒီးဒုတ်မှလည်း မျက်နှာပေါ်ရှိ မရှိသည့် ချွေးများကိုသုတ်ရင်း စက်ဘီးကိုဖမ်းရန် အကျအန ပြင်ဆင်လျက်သားနှင့်။ ကိုရင်ရှူံးသည်ကား အပေါက်ဝတွင် တွေတွေကြီးရပ်လျက်သား၊ စက်ဘီးပေါ်မှပင် မဆင်းမိပဲ ပါးစပ်အဟောင်းသားဖြင့် ငေးကြည့်နေမိသည်။ တစ်ခါဖူးမှ ယခုလိုဖြစ်နေသည်ကို မကြုံဖူးပေ။ ကျူရှင်နှင့်တွဲလျက်တွင် ဆရာတို့လင်မယားအိမ်ရှိသဖြင့် အခြေအနေမေးရန် အိမ်ပေါ်သို့လှမ်းတက်လိုက်သည်။
လှေကားတစ်ဝက်မှာပင် ဆရာနှင့် ဆရာမတို့ ရယ်မောသံကို ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ကြားရသည်။ ဘာတွေများအူမြူးနေသလဲဟု ဧည့်ခန်းကိုကြည့်လိုက်သောအခါ ဆရာနှင့် ဆရာမတို့မှ အချင်းချင်းလက်ညှိုးထိုးလျက်သားနှင့်ပင် အူလှိုက်သည်းလှိုက်ရယ်မောနေကြလေသည်။ ကိုရင်ရှူံးဝင်သွားပြီး အခြေအနေမေးသောအခါ သူတို့နှစ်ဦးရှေ့တွင် ကိုရင်ရှူံး ဘာများ အနေမှားမိသည်မသိ၊ ကိုရင်ရှူံးအား ကြည့်ကာ ရယ်နေကြသည်မှာ သတင်းပင် မေးမရသည့်အတွက် စိတ်ပျက်လက်ပျက်ရှိနေတုန်းမှာပင် အောက်ဘက်ရှိ ကျူရှင်ခန်းတွင်းမှ အေးငြိမ်းသွင်၏ အလန့်တကြား အော်သံကိုကြားရသဖြင့် ကိုရင်ရှူံးလည်း အသည်းအသန်ပြေးဆင်းသွားရာ အေးငြိမ်းသွင်ကို ကြောက်လန့်တကြားဖြင့် ကျုရှင်၏ထောင့် တစ်နေရာတွင် တွေ့ရတော့သည်။ ခြေထောက်တစ်ဖက်မှလည်း ဟိုကန်၊ ဒီကန်ဖြင့်။ အနီးတွင်မတော့ သူမအချစ်တော်ကြောင်လေးမှ တစ်ပါး၊ ဘာမှ မတွေ့ပေ။
သူမအား သတင်းမေးလို့ရပါသေးသည်။ ဘာဖြစ်တာလဲဟုမေးသောအခါ သူမမှ သူမကြောင်လေးအား လက်ညှိုးထိုးပြလျက်
” အဲဒါ ဘာအကောင်ကြီးမှန်းမသိဘူးဟယ်.. ငါ့အနားတိုးတိုးလာတယ်.. အစွယ်ကြီးတွေကလည်း ကြောက်စရာကြီး”
သူမအချစ်တော်ကြောင်လေးကို လက်ညှိုးတစ်ထိုးထိုးဖြင့်။ ကိုရင်ရှူံးလည်း အနည်းငယ် သဘောပေါက်သလို ဖြစ်လာတော့သည်။ ကျူရှင်ရှိလူများအားလုံး အမူအကျင့်တွေ ပြောင်းနေသည်မှာ အကြောင်းအရာတစ်ခုတော့ ရှိပေမည်။ မသင်္ကာသဖြင့် နောက်ဖေးဘက်သို့ သွားကြည့်သောအခါတွင်မတော့ ထွန်းနိုင်ဝင်းသည်ကား ဟင်းအိုးနားတွင် ကောင်းကောင်းကြီး အိပ်ပျော်လျက်သား။ ဟင်းအိုးထဲတွင်မတော့ ကြက်သားဟင်းရည်အစအနသာရှိတော့သည်။ ဘေးပါတ်ဝန်းကျင်တွင် ရှာလိုက်သောအခါ သတင်းစာစက္ကူထုပ်လေးတစ်ခုကို တွေ့ရသည်။ အထဲတွင်မတော့ ဆေးရွက်ကြီး အမှုန်အစများ။
သေချာပါပြီ။ ထိုစဉ်က နာမည်ကြီးခဲ့သော ရွှေဒင်္ဂါးခေါ် ဆေးခြောက်အကောင်းစားတစ်မျိုးကို အားလုံးစားမည့်ဟင်းတွင် ထွန်းနိုင်ဝင်းမှ ကြံစည်ခပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း။ ကိုရင်ရှူံးလည်း ထိုညက ကြက်သားဟင်းလေးကို မစားလိုက်ရပဲ အားလုံးအိပ်ပျော်သွားသည်ထိ မျက်တွင်းဟောက်ပက်ဖြင့် ကင်းစောင့်ပေးခဲ့ရလေတော့၏။
သူတို့တွေကား အလွန်လေးကိုမှပင် ပျော်ရွှင်လျက်သား………….။ ။
ဆေးခြောက်ဆိုတာ.. Marijuana လားသိချင်ပါတယ်..။
ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ.. ဆေးလက်မှတ်နဲ့ဝယ်ရနိုင်တာမို့.. ရရင်..ကြက်သားဟင်းချက်ကြည့်မလို့..။
သဂျီးရေ… ပုံထဲကပုံကတော့ မှားနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရှမ်းပြည်မှာတော့ အရင်တုန်းက အိမ်တွေမှာ စိုက်ကြပါတယ်။ အပင်ကတော့ လူ့ခါးတစ်ဝက်သာသာပါ။ အရွက် ဖားဖား၊ ၀ိုင်းဝိုင်းကြီးတွေ ဖြစ်ပါကြောင်း
ကိုရင် ရှုံးရေ …
ကျနော်လည်း တခါက ဆေးဘဲတွေ ဒဏ်ကို အတော်လေး ခံခဲ့ဖူးကြောင်းပါ ….။
တစ်ခါသားပေါ့ဗျာ …စတူရီယိုမှာ ဂီတာလိုင်း တစ်လိုင်း အကြွေးကျန်နေလို့ တီးပေးဖို့အသွား ….။
သူငယ်ချင်း ရပ်ပါတကောင် သူ့ ဂျူတီပီးလို့ ထိုင်ကွဲနေတာကို ..အစ်ကိုကြီးကျနော့် စောင့်မလား
ဂျူတီပီးရင် ကစ်ရအောင် ခေါ်မိပါတယ်……
မင့် ဘောင်းဘီက မိုက်လှချည်လား မှန်း …ဆိုပီး လက်ညှိုးနဲ့ လက်မကို ခပ်ဆဆလုပ်ရင်းဆွဲယူပါတယ်..
(နောက်မှ ဆေးပြယ်မှ ပြန်ပြောလို့သိတာ ခပ်လှမ်းလှမ်းက ကျနော့် ကို လက်နဲ့ညှပ်ယူလိုက်တာ
ဒါ့ပုံထဲက ကပ်ကြေးနဲ့ ဖြတ်ကိုက်လိုက်သလို လက်ထဲ ပါလာသတဲ့လေ…)
မင့်အောက်ပိုင်းကြီးပြန်ယူကွာ ဆိုပြီး ပြန်တွန်းလွှတ်လိုက်တော့ ဂျစ်ဆော ဆက်တဲ့အတိုင်း ….ပြန်ကပ်သွားသတဲ့…
အဲ့လာ တီးလို့ခတ်လို့ပီးတော့ အမြည်းသွားဝယ်ရအောင်ဗျာ ဆိုပီး ကွမ်းယာဆိုင်မှာ အာလူးကြော် ၀ယ်ဖို့.သွားပါတယ်…..
ညီလေး ..အချဉ်ထုတ်လေးတွေ လှတယ် နော … တဲ့…
ကျနော် လည်း ဟုတ်ကဲ့အစ်ကိုပေါ့ ….
တစ်ထုပ်ပြီး တစ်ထုပ်ဖြုတ်လိုက်တာများဗျာ ….လက်ထဲ တပွေ့တပိုက် …..
နောက်မှ ပြန်မေးကြည့်တော့ ငါသိတယ်ကွ တဲ့ ရပ်လို့ မရဘူးတဲ့ …..
အချဉ်ထုတ် ၁ထုတ် ၅၀ခေတ်မှာ ၁ထောင်ကျော်ဖိုး ..အထုပ်၂၀ကျော် ရှင်းပေးခဲ့ရဖူးကြောင်းပါ ….
ဆန်းတော့ ဆန်းသား …ခါတိုင်း ဘီယာ ၄ခွက်နဲ့ ကွဲပြဲနေတဲ့လူက …အဲ့အချိန် ၁ပုလင်းလုံးလောင်းချလည်း
မဖြုံရေးချာ မဖြုံဗျာ …..။
အိမ်ပြန်တော့တောင် လုပ်လိုက်သေးတယ် သူက …လမ်းအတူလျောက်နေတာကို မင်းတို့ကို ငါက အပေါ်စီးက
အဲ့ကတည်းက ဆေးဘဲဆို ကြောက်ကြောက်ဗျာ ….။ဆေးအမျိုး အစားတွေတော် မသိပါဘူး ..ကြောက်တာပဲသိတယ်….
စကားမစပ် သဂျီး ချက်စားဖြစ်ရင် ပြောပါနော ….
အဲ့နေ့ ….ဝေါင်ဝေါင်ရှေး မလို့ …..
သူကြီးကို ထိုးမုန့် ကရေကယာပေးမလို့ စဉ်းစားထားတာ အခုတော့ မပေးတော့ဘူး
ဆေးခြောက်ပဲ အမေဂျီးကန်ကို ပို့ပေးတော့မယ် …
ကိုရင်ရှုံးကတော့ တကယ့်အဖြစ်အပျက်ဆိုတာ ယုံတယ်ဗျာ …
ရေမြောင်းသေးသေးလေးကို ချောင်းလို့ ထင်နေတယ်ဆိုတော့
မျက်ကျယ်ဆိုတာ ဖြစ်မှာပေါ့နော် ….
တကယ်တော့ သူမစားရဘူးဆိုတာ ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မှာပါ …
တကယ့်အဖြစ်အပျက်ရဲ့ ပြောင်းပြန် သူရေးတာ ဖြစ်လိမ့်မယ် …
သူတစ်ယောက်ထဲ မှောက်နေပြီးတော့ ကျူရှင်တစ်ခုလုံးက သူ့ဝိုင်းထိမ်းနေရတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ….
နောက်များကြုံပါမှ No.4 ချတဲ့အကြောင်းရေးဦးမယ်….
ကြုံမှမလုပ်ပါနဲ့ဗျာ… မြန်မြန်လေးတင်ပေးနိုင်ရင်တင်ပေးပါ… စိတ်ဝင်စားလို့ ပါ…
ဟိုးတလောလေးကတော့ ရွာထဲက တယောက်က သူလည်း မသိလိုက်ဘဲ သူများ ဆေးခတ်ထားတာကို စားမိပြီး ရွာသူပြုစားပါတယ်ဆိုပြီး ပယောဂ ဆရာနဲ့ကုလိုက်ရတယ်လို့ ဖတ်လိုက်ရတယ်…
အခုတော့ သိတဲ့သူရှိလို့ တော်သေးတာပေါ့..
ဒါနဲ့ အဲ့လို ဆေးမူးပြီး ယုန်ထင်ကြောင်ထင်တွေ ဖြစ်ကုန်တော့ မူးပြီး အိပ်ပျော်ပြီး နိုးလာရင် ဘာမှ မသိတော့ဘူးပေါ့…
ဆေးမူးနေတုန်း ဓားတွေ ဘာတွေနဲ့များ ခိုက်မိ ခုတ်မိရင် အန္တရယ် မကြီး ဘူးလား….
ဒါနဲ့များ သူကြီးက ဆေးမူးချင်ရတယ် လို့ …အံ့ရော …
မတော်လို့များ ဆေးမူးပြီး ရွာကြီး မီးတင်ရှို့ရင် ဒုက္ခ .. အကျိုးတွေတော့ နည်းကုန်တော့မှာပဲ
ဆေးခြောက်က တခြားဟာတွေလို မဟုတ်ဘူး pooch ရဲ့
ယဉ်တယ် … ဘယ်လောက် အရက်သောက်ပြီးသွေးဆိုးတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်
ဆေးခြောက်မူးရင် ပျော့သွားရော … ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တွေ ဖြစ်ကုန်ကြတယ် ..
နဂိုကမှ ပျော်တတ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ ထိမ်းမနိုင် သိမ်းမရပေါ့ …
ဆေးခြောက်မှာ မျက်ကျဉ်း မျက်ကျယ်ရှိတယ် ကြားဖူးတယ် ..
မျက်ကျဉ်းဆိုတာက အကြီးကြီးကို အသေးလေး ထင်နေတာ ..
မျက်ကျဉ်းဆေးခြောက်နဲ့ဆိုရင် တံခါးပေါက်အကြီးကြီးကို ကိုယ့်ကိုယ်လုံးနဲ့ မကာတဲ့ သေးသေးလေးထင်လို့ လေးဘက်ထောက် ၀င်တာတွေ ဘာတွေဖြစ်ရော
မျက်ကျယ်ကတော့ အသေးလေးကို အကြီးကြီးထင်တာ ..
အခုဇာတ်လမ်းထဲကလို မြောင်းသေးသေးလေးကို ချောင်းအကြီးကြီးထင်ပြီး ကူးမရ ပြုမရ ဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့ …
အရမ်းမူးတဲ့သူဆို ပိုဆိုးတယ်… လမ်းသွားရင် ငုတ်တုတ်ထိုင်နေတယ် .. ဘာလို့လဲ မေးတော့ မင်း ဒီရေအိုင်ကြီးကို ဘယ်လိုကူးသွားတာလဲတဲ့ …
သူ့ရှေ့ကြည့်လိုက်တော့ ကလေးသေးကွက်လောက်ရှိတဲ့ ရေဗွက်လေး ..
အဲဒီ ကြက်ကာလသားဆေးခြောက် ဟင်း က ဘာရောဂါပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ် ဆိုတာလေးပါ ပြောပါဦး ကိုယ့်လူရ
ပြော၇ရင်.. မာရိဝါးနားက.. ဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်..။
အဲဒါကြောင့် ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာ.. ဆေးဆိုင်တွေမှာ ဆေးလက်မှတ်နဲ့ဝယ်လို့ရတယ်..။
မီးရို့ပြီးအငွေ့ရူလိုက်ရင်.. သွက်ချာပါဒတို့လို ကြွက်သားဆွဲေ၇ာဂါတွေသက်သာတယ်ပြောတယ်…။
ယောဂကျင့်.. တရားထိုင်ရင် သဘာဝအတိုင်း ခန္တာကထွက်လာတဲ့ဓါတ်တချို့နဲ့တူတာတွေကို.. အဲဒီ မာရိဝါးနားက ပေးနိုင်တယ်လို့..စာထဲဖတ်ဖူးတယ်..။
အဲဒါကို တချုိ့ကပြောတော့.. ဆေးခြောက်တဲ့..။
အခုထိလည်း.. သိတဲ့သူက.. ပုံလည်းမတင်..ပြောလည်းမပြောပြဘူး..။
အဲတာမှီဝဲပြီးရင် ၀ါးတီးတော့ အမုန်းဆွဲသဗျာ..
ကစားကွင်းက သံဒင်္ဂါးနဲ့ဘဲ ချက်မယ်
မျက်ကျဉ်း မျက်ကျယ်ဆိုတာအလကား အပိုတွေ တကယ်လည်းမဆွဲဖူးဘဲနဲ.
ရှက်ပြဲတဲ့မျက်လုံးနဲ.မတူဝူး သေသေချာချာကြည့်ရင်သိသာဒယ် :-)
အားပါး တကယ့်ဆရာက ခုမှ ကြွလာတာ …
လုပ်ပါဦးဆရာရဲ့ အတွေ့အကြုံလေး ဘာလေး ..
ဆေးခြောက်ရဲ့ နာမည်ကတော့ Marijuana လို့ စာမှာသင်ရပါတယ်။
အပင် အရွက် မမြင်ဖူးပါ။
ကြည့်ရတာ.. မာရီဝါးနားက.. ရောဂါတွေတော်တော်ပျောက်စေတာပဲ..။
Learn more: http://www.naturalnews.com/034599_medical_marijuana_juicing_cures.html#ixzz1j6FZwcRt